Inona avy ireo rindrambaiko fitantanana trano fisakafoanana lehibe? | Vaovao Gadget
Ignatius Room | | fampiharana
Raha ny amin'ny fitantanana orinasa, raha tsy te ho very amin'ny antontan-taratasy, anotasy sns isika, ny tsara indrindra vitanao dia ny anaomampiasa rindrambaiko mifantoka amin'ny orinasa, rindrambaiko iray izay hanampy antsika tsy isan'andro isan'andro, fa raha ny amin'ny fahafantarana ny tombom-barotra azon'ilay orinasa, ny fanomanana hetra, ny fahalalana hatrany ny tahiry, ny vola miditra, ny fandoavam-bola ...
Raha, ho fanampin'izany, orinasa misy vokatra marobe, toy ny trano fisakafoanana, dia sarotra be ny raharaha, satria ny mpiasa sy ny mpiasa dia tsy maintsy mahalala ny vidin'ny serivisy atolotray anay tsirairay avy. Ny vahaolana amin'ity olana ity dia ny fampiasana a rindrambaiko fitantanana trano fisakafoanana.
Ireo rindranasa ireo dia ahafahantsika mamorona lisitry ny vokatra sy / na serivisy rehetra arosonay miaraka amin'ny vidiny, amin'izay ilay tompon'andraikitra amin'ny famandrihana dia afaka mivezivezy mora foana amin'ny alàlan'ny fampiharana handeha isa ny serivisy ho an'ny mpanjifa rehetra rehefa manompo azy ireo ianao na mivantana rehefa apetraka ny baiko, raha mifanaraka amin'ny fitaovana finday na tablette ny fampiharana.
Raha mieritreritra ianao fa tonga ny fotoana anaovana nomerika ny orinasanao fikarakarana, dia bara, trano fisakafoanana, fisakafoanana, trano fisakafoanana alaivo ... dia asehonay anao ny fampiharana fitantanana trano fisakafoanana tsara indrindra.
3 Fandraisana vahiny Glop POS
4 Fitsaharana mialoha amin'ny ICG
6 Mpandroso sakafo 10
Iray amin'ireo tsara indrindra rindrambaiko fitantanana trano fisakafoanana Hitanay tao OfiBarman izany. Misaotra an'ity fampiharana ity azontsika atao mitantana ny filan'ny bara, gilasy, pizza, trano fisotroana, trano fisakafoanana, kafe... manomboka amin'ny fanaraha-maso ny tahiry ka hatramin'ny varotra, ny fandoavam-bola amin'ny mpamatsy, ny latabatra, ny varotra ataon'ny mpiandry ...
Ho fanampin'izany, amin'ny alàlan'ny fampiharana OfiComanda, ireo mpampiandry dia afaka manatanteraka ilay manafatra mivantana avy amin'ny smartphone na tablette fandefasana baiko any an-dakozia amin'ny alàlan'ny mpanonta sy ny fampiharana OfiBarman ho an'ny fitantanana fanangonana manaraka.
OfiBarman dia manana fametrahana mihoatra ny 2.550 na any Espana na any Mexico, Peru, Panama, ny Repoblika Dominikanina ary ao anatin'izany ny franchise an'ny cafeterias sy trano fisakafoanana, hotely, clubclub ... Ho an'ireo izay tsy mikasa ny handany vola be amin'ny voalohany, ity rindrambaiko ity dia azo atao ao amin'ny fomba roa samy hafa: mividy na mandoa isaky ny ampiasaina.
Safidy mahaliana iray hafa hitantanana orinasa fisakafoanana no hita ao amin'ny fampiharana Doscar Bar. Misaotra an'ity fampiharana ity, izay miavaka amin'ny maha-izy azy mora ianarana, afaka mitantana orinasa fandraisam-bahiny izahay.
Ny fampiharana dia ahafahanao mifehy ny fiovan'ny mpiandry, mametra ny fisokafan'ny boaty ho an'ny mpiasa sasany, mamorona sy manova ny tahiry fitahirizam-bokatra, mamorona marika fanontana miaraka amin'ny barcode, mamorona tombatombana, faktiora proforma ... ho fanampin'ny fanondranana ireo tatitra amin'ny endrika .pdf, .xlsx ary .docx.
Raha fampiharana tsara mendrika ny sira, dia mamela antsika hamorona a sarintany amin'ireo latabatra fandraharahana aiza no ampifandraisina ny tsirairay amin'ireo baiko, alefaso amin'ny mpanonta printy ny baiko arak'izay anaovana azy ireo, ampidiro ny rafitra famandrihana, hanonta ireo tatitra marobe isan-karazany ...
Fandraisana vahiny Glop POS
Glop POS fandraisam-bahiny dia sehatra hitantanana orinasa fandraisam-bahiny mamela antsika miasa miaraka amin'ny sehatra fanaterana sakafo toy ny Glovo, Just Eat, Deliveroo ankoatry ny hafa, satria mamela antsika hampiditra ny baiko avy amin'ny tranonkalantsika amin'ireo sehatra ireo.
Amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra ny fanjakana ny fanomanana lovia ary ny ora sisa mandra-pialany ao an-dakozia. Azo atao izany noho ny monitor an-dakozia, fampiharana izay azontsika apetraka amin'ny takelaka na finday avo lenta izay ananan'ny mpanao fahandro sakafo ny lovia rehefa voaomana izy ireo, ka manaitra ny mpandroso sakafo hanatitra azy ireo amin'ny mpanjifa.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo fitaovana finday sy takelaka finday, ireo mpampiandry dia afaka manamboatra izay baiko rehetra ao an-dakozia, ao anatin'izany ny akora fanampiny na ny fanesorana ireo vokatra ao anaty lovia ho fanampin'ny manampy hevitra fanampiny ao an-dakozia mba hanomanana ny lovia amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Fitsaharana mialoha amin'ny ICG
ICQ Front Rest dia natao ho mitantana asa fandraisam-bahinyManomboka amin'ny orinasa madinidinika ka hatrany amin'ny franchise lehibe, miaraka amina rindrambaiko mora ampiasaina, mamela ny mpiandry hametraka baiko avy amin'ny smartphone ary mandefa azy ireo any an-dakozia ho fanomanana.
Mamela antsika koa io mitantana fipetrahana latabatra, mamorona rakitra rakitra, mitantana tahiry, manaova famandrihana ary koa, mifanaraka amin'ny baiko amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny orinasa ihany koa izy.
Tsy toy ny rindranasa hafa, azontsika atao mametraka fanairana ho an'ny toe-javatra sasany toy ny tsy fahampian'ny tahiry, ny mpiasa izay tsy mandeha any amin'ny toeram-piasany, rehefa vita ny fanidiana ny vola ... Natao ho an'ny franchise ity rindranasa ity satria mamela ny fitantanana lavitra ny orinasa rehetra amin'ny toerana tokana.
Loyverse dia rindrambaiko mamela avadiho ho POS ny finday avo lenta na ny takelaka, na inona na inona orinasa kely na fivarotana marobe amin'ny endrika franchise ary misy any amin'ny firenena 170 mahery izy io.
Ny fampiharana mamela antsika hahafantatra amin'ny fotoana rehetra ny satan'ny lisitra, mandefa fanairana aminay rehefa latsaka ambany noho ny kely indrindra napetrakay, mamela anay handefa baiko ho an'ny mpamatsy. Io dia ahafahantsika mamakafaka ihany koa ny vola miditra azon'ny mpiasa tsirairay, mba hahafantarantsika ny ora fidirana sy fivoahana amin'ny asany, izay ahafahantsika miasa ora firy tamin'ny faran'ny volana.
Ho fanampin'izany, manolotra antsika a famakafakana feno ny varotra, miaraka amin'ny fidiram-bola, salanisa, tombony, fantaro izay entana malaza, midira amin'ny tantaran'ny varotra andro aman'alina (izay ahafahantsika mahalala izay ora mahery indrindra amin'ny orinasa) ankoatry ny fanondranana ireo fampahalalana rehetra ireo amin'ny takelaka izay ahafahantsika mampihatra raikipohy hafa hahitana angona hafa izay tsy atolotry ny fampiharana anay.
Mpandroso sakafo 10
Noho ny coronavirus, maro ireo orinasa nanala ny taratasy ara-nofo, manolotra an'ity vaovao ity amin'ny alàlan'ny kaody QR, avy aiza ny mpanjifa dia afaka mametraka ny baikony handefa any an-dakozia avy amin'ny telefaona anao.
Camarero 10 dia mifangaro amin'ireo baiko napetraka amin'ny alàlan'ny tranokala ary miharo amin'ny lehibe sehatra fanaterana sakafo. Ny fisoratana anarana dia misoratra anarana ny fidirana sy ny fampiasan'ny mpampiandry ao amin'ny POS, mamela ny famerana ny fidirana amina toerana sasany, mampiseho sarintany misy ny fizarana sy ny toeran'ny latabatra ...
Numier POS dia safidy mahaliana iray hafa izay tsy maintsy dinihintsika rehefa mahita ny rindrambaiko fitantanana fandraisam-bahiny tsara indrindra ho an'ny orinasanay. Misaotra an'ity rindranasa ity, afaka miandry ny mpiandry mampiasa smartphone mba hanafarana ary / na fanovana eo imason'ny mpanjifa, ny baiko mifandraika mivantana amin'ny latabatra.
Ity fampiharana ity dia mamela antsika hanana fifehezana amin'ny fotoana rehetra ny fiasa sy ny tombom-barotra azonay, noho ny fitantanana ny varotra sy ny fandaniana, fidiram-bola amin'ny alàlan'ny vola na karatra, fanaraha-maso ny tahiry trano fitehirizana, vidin'ny mpiasa, fandaniana herinaratra, hofan-trano ...
Mamela antsika koa i Numier mampifandray ny baiko avy amin'ny tranokalanay amin'ny sehatra fanaterana sakafo sy / na baiko haka any amin'ny orinasa. Izy io koa dia mamela antsika hamorona kaody QR ho an'ny mpanjifa hiditra amin'ny entantsika amin'ny alàlan'ny finday avo lenta ary hahafantatra ny mombamomba ny alergen fa tsy hametraka baiko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » fampiharana » Inona avy ireo rindrambaiko fitantanana trano fisakafoanana lehibe?
PNY XLR8, lalao filalaovana SSD [Review]